"I-Loft e-Lederach" Umtsalane weMbali ePhakamileyo - I-Airbnb
"I-Loft e-Lederach" Umtsalane weMbali ePhakamileyo
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguEric
Indlu yakhiwa ngo-1842 kwaye igumbi eliphezulu lalungiswa ngokupheleleyo ngoFebruwari 2019. Iindwendwe ziya kuba nokufikelela kumgangatho wesibini wonke kunye nomnyango wangasese otshixiweyo. Izixhobo ezitsha kunye neninzi yezixhobo zasekhitshini zompheki wasekhaya. Kukho igumbi lokuhlambela elihlaziywe ngokupheleleyo eline-spa efana neshawari yokuhamba ngemvula. Iindwendwe zingonwabela i-55 inch Smart TV. Iwasha efanelekileyo kunye nesomisi ziyafumaneka simahla. Le ndawo ifanelekile kubahambi beshishini, abahamba bodwa, izibini ezirhoxayo.
“ILoft eLederach” yeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka ngelixa undwendwela abahlobo okanye usapho edolophini, okanye udlula ePennsylvania kuhambo lweshishini okanye iholide unyuka usehla kuNxweme oluseMpuma.
Indlu ibekwe kwilali ethandekayo nethandekayo yaseLederach ePennsylvania. Ungasonwabela isidlo sakusasa okanye isidlo sasemini kwigumbi leTea leLederach elikufutshane. I-Bay Pony Inn, eyasekwa ngo-1752, inebhari enkulu kwaye ivulekele isidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa ngokuthe ngqo ngaphesheya kwesitalato. Indawo yegalufa kawonke-wonke e-Lederach yimizuzu eyi-1 yokuqhuba. Ilali yaseSkippack iimayile ezi-3 ezantsi kwendlela ineevenkile ezininzi kunye neendawo zokutyela.
Njengomamkeli wakho, ndihlala kwaye ndisebenza kufutshane ngoko ke ndihlala ndifumaneka ngemibuzo okanye naluphi na uncedo onokulufuna.